Calanka TV – Video
Nin badda kala soo baxay yaxaas caloosha uga dhaggan, si dirqi ahna looga fujiyay: VIDEO
Muwaadin Mareykan ah oo ku nool gobolka Florida islamarkaana lagu magacaabo Ervin Maccarty ayaa waxaa uu quusay badda dhexdeeda, waxaana uu soo baxay isaga oo caloosha uga dhaggan yahay yaxaas yar oo dirqi looga fujiyay.
by calanka —	September 27, 2017 —	Video
Pilot talyaani ah oo ay wax ka khaldameen oo badda la galay diyaarad dagaal oo miig ah: VIDEO
Darawal diyaaradeed oo u dhashay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabay Gabriele Orlandi ayaa waxaa uu ka qeyb-qaadanayay show diyaaradeed oo lagu magacaabo Terracina AirShow 2017 kaddib markii ay wax ka khaldameen dabadeedna diyaaraddii uu la galay badda.
by calanka —	September 26, 2017 —	Video
PUNTLAND: Dooni hub siday oo lagu qabtay duleedka magaalada Bosaso: VIDEO
Ciidamadda badda Puntland ayaa magaaladda Bosaso ku soo bandhigay hub si sharci darro ah la doonayay in lagu soo galiyay Puntland kaas oo saarnaa laash nooca shabaxa ah, waxaana laga dejinayay xili dambe oo xalay ah xeeb ku taal duleedka Bosaso.
by calanka —	September 23, 2017 —	Video
Halkaan ka daawo khudbadda r/wasaare Khayre uu ka jeediyay UN-ka: VIDEO
R/wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa waxa uu ka jeediyay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay kaas oo ka socda xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York.
Wiil wadada ka helay boorso yar oo lacag 1500 dollar ku jirto, una geeyay ciddii laheyd: VIDEO
Wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Sacramento ee dalkaasi Mareykanka islamarkaana lagu magacaabo Tyler Opdyke ayaa waxaa uu ka helay boorso ay ku jirto lacag 1500 oo dollar wado yar oo hormarta guri kaas oo u geeyay boorsada lacagta ciddii iskalaheyd.
by calanka —	September 22, 2017 —	Video
Heesta sannadkan ka shidan gudaha Soomaaliya “Nabadaa naas la nuugo leh”: VIDEO
Hees aad u macaan oo loogu luuqeynahao afka “Maay-maayga” ayaa muddooyinkan dambe waxa ay ka shidan tahay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta. Heestan ayaa waxaa lagu magacaabaa “Nabadaa Naas La Nuugo Leh”.
by calanka —	September 20, 2017 —	Video
Booliska Chikago oo sii daayay muuqaalka gabar madow oo meydkeeda laga helay hotel: VIDEO
Booliska magaalada Chicago ayaa soo bandigay muuqaalka gabar madow oo iyadoo cabsan soo gashay hotelka Crowne Plaza Chicago O’Hare Hotel taas oo saacado kaddib laga helay meydkeeda qol qaboojiye ah. Gabadhan ayaa lagu magacaabay Kenneka Jenkins, waxa ayna jirtay 19 sano.
by calanka —	September 18, 2017 —	Video
Bandhiggii buugaagta Muqdisho oo lasoo gabo-gabeeyay – daawo qaabka uu u dhacay: VIDEO
Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gunaanaday maanta barnaamijkii bandhigga buugaagta ee saddexdii maalmood ugu dambeysay ka socday caasimadda Soomaaliya. Waa sannadkii saddexaad oo lagu soo bandhigo caasimadda barnaamijkan.
by calanka —	September 15, 2017 —	Video
Darawal nasiib badn oo ka bad-baaday shil mucjiso ah iyo geed gaarigiisa kusoo hor dhacay: VIDEO
Duufaanta Irma oo saameyn kala duwan ka geysatay dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa ay sababtay khasaarooyin isugu jira shilal iyo fatahaadyo, waxaana ka mid ah shilalkaasi darawal ka bad-baaday shil mucjiso ah.
by calanka —	September 14, 2017 —	Video
Lammaane faraanti ay isu galin lahaayeen uga dhex dhacay wabi: VIDEO
Lammaane ceesho-milix ah oo faraanti ay kasoo bixiyeen 3000 dollar uga dhex dhacay wabi ku hoos yaalay buundo ay isugu gelin lahaayeen faraantiga. Ninka wax guursanaya ayaa ah taksiile, waxaana uu ka naxay faraantiga qaaliga ah ee wabiga uga dex dhacay.
by calanka —	September 13, 2017 —	Video